Webka Isku duubo Khabiir Cilmiyeed
Webka xoqista, oo loo yaqaano goosashada webka, waa farsamo loo adeegsado macluumaadka laga soo qaato bogagga internetka. Qalabka goosashada Webka wuxuu si toos ah u isticmaali karaa webka iyadoo la adeegsanayo HTTP ama shabakadda webka. Iyadoo geeddi-socodka gacanta laga hirgaliyo by user user, farsamadu guud ahaan waxay ku saabsan tahay geedi socodka automated lagu hirgeliyey iyada oo la isticmaalayo crawler web ama bot.
Webka qashin-saariddu waa nidaam marka xogta qaabaysan laga duubo websaydhka macluumaadka maxaliga ah ee dib-u-eegista iyo dib-u-bixinta. Waxay ku lug leedahay samaynta bogga internetka iyo soo saaridda waxyaabaha ay ka kooban tahay. Mawduuca bogga waxaa laga yaabaa in la xakameeyo, la baaro, dib loo qaabeeyo, iyo xogaheeda loo qoondeeyay qalab kaydin oo maxalli ah.
Bogagga shabakadaha badiyaa waxay ka sameysteen luuqadaha ku calaamadeeynta qoraalka sida XHTML iyo HTML, labaduba waxaa ku jira tiro badan oo ah xogta waxtarka leh ee qaabka qoraalka. Si kastaba ha ahaatee, qaar badan oo ka mid ah boggaan ayaa loogu talagalay dadka isticmaala dhamaadka bini'aadamka oo aan loo isticmaalin isticmaalka automat. Tani waa sababta keentay in la abuuro software ah.
Waxaa jira farsamooyin fara badan oo loo shaqeyn karo si loo yareeyo khadka webka. Qaar ka mid ah ayaa lagu soo koobay hoosta:
1. Nuqul Dad-adoo-dhajin
Waqti ka waqti, xitaa kuwa ugu fiican qalabka shabakadda saxsanaanta iyo hufnaanta nuqulka buug-gacmeedka aadanaha-iyo-goynta..Tani waxay inta badan ku khuseysaa xaaladaha marka bogagga internetka ee caqabadaha hortaagan si looga hortago qalabka mashiinka mashiinka.
2. Xirfadaha qoraalka
Tani waa hab sahlan laakiin aad u awood badan oo loo isticmaalo in lagu soo saaro xogta laga helo bogagga shabakadda. Waxaa laga yaabaa inay ku saleysnaato amarka ambalaasta ee UNIX ama kaliya tas-hiilaad joogta ah oo ku saabsan luqadda barnaamijyada, tusaale ahaan, Python ama Perl.
3. Barnaamijka HTTP
Barnaamijka HTTP waxaa loo isticmaali karaa bogagga shabakada ee caadiga ah iyo firfircoonba labadaba. Xogta waxaa lagu soocaa iyada oo loo marayo codsiyada HTTP ee server-ka fog-fog iyada oo la adeegsanayo barnaamijka socket-ka.
4. Khilaafka HTML
Websiyo badan ayaa u muuqda in ay si ballaaran oo bog ah loo abuuray si kaamil ah oo ka yimid ilaha qaabka asaasiga ah sida database. Halkan, xogta ku jirta qaybta la midka ah ayaa lagu qoreen boggag la mid ah. In jajabyada HTML, barnaamijku wuxuu guud ahaan ogaadaa qaab-sidahan oo kale ah ilaha xogta gaarka ah ee macluumaadka, ka soo baxa waxa ku jira ka dibna wuxuu u turjumayaa qaab shuraako, oo loo yaqaano duub.
5. DOM gaar ah
Farsamadan, barnaamijku wuxuu ku dhexjiraa shabakad internetka oo buuxa sida Mozilla Firefox ama Internet Explorer si loo helo dibad-baxa ay soo saartey qoraalka macmiilka. Dareemayaashan ayaa sidoo kale laga yaabaa inay bogagga bogagga u kala soocaan geed DOM iyadoo ku xiran barnaamijyada laga soo saari karo qaybo ka mid ah bogagga.
6. Aqoonsiga Maqalka ee Semantic
Bogagga aad doonayso inaad xoqdo waxaa laga yaabaa inuu qaato calaamadaha astaamaha ah iyo qoraallada ama metadata, kuwaas oo loo isticmaali karo helitaanka qashinka xogta gaarka ah. Haddii faahfaahinadani ku qoran yihiin bogagga, farsamadan waxaa loo arki karaa kiis gaar ah oo ka mid ah DOM. Dulucdaas waxaa sidoo kale lagu abaabuli karaa lakabka macmiilka, ka dibna waxaa loo kaydiyaa oo u maamulaa si gooni ah bogagga shabakadda. Waxay u ogolaataa jajabiyey in ay soo rogaan qorshaha xogta iyo sidoo kale amarrada ka timid lakabkan ka hor intaanay ka jarin bogagga Source .